Tokio Badili: "nnwale" ahụ gosipụtara ọrụ Haruki Murakami | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Badyo Tokyo (1987) bu akwukwo nke ise nke onye ode akwukwo Japan bu Haruki Murakami. N'oge ewepụtara ya, onye edemede Japan ahụ amaghị na ụwa mbipụta ya wee gosi ụdị dị iche na mbipụta ya ndị gara aga. Kedu ihe ọzọ, ya onwe ya chere maka ederede a dịka ụdị nnwale nke ebumnuche ya bụ iji nyochaa ụzọ miri emi n'ụzọ dị mfe.
Ihe si na ya pụta akụkọ nke nwere ike ijikọ ndị mmadụ na ọgbọ niile, ọkachasị ndị na-eto eto. N'ezie, ihe karịrị nde anọ nke Badyo Tokyo. N'ihi ya, ọ ghọrọ utu aha maka onye edemede Japan, bụ onye riteworo ọtụtụ onyinye kemgbe ahụ. Ọzọkwa, aha ya na-aga n'ihu na-abụ onye ndoro-ndoro maka Nobel Nrite na Literature.
1 Nnyocha Tokyo Blues
1.2 Enyi na ọdachi
2 Tokyo blues, n'okwu Murakami
3 Nkebi ahịrịokwu iri Tokyo
4 Banyere onye edemede, Haruki Murakami
4.1 Okwu mmalite nke onye na-ede akwụkwọ n'ọdịnihu
4.2 Nbili nke ode akwukwo kachasi nma
5 Stylistic na echiche atụmatụ nke akwụkwọ Haruki Murakami
5.1 Surrealism, anwansi n'ezie, oneirism ... ma ọ bụ ngwakọta nke ha niile?
5.2 Nke Murakamian
5.3 Gini mere akụkọ banyere Murakamian ji kpatara oke ibu iro?
6 Akwụkwọ Murakami 5 kacha ere ahịa
Na nchikota nke Badyo Tokyo
Mmalite nke akwụkwọ na-ewebata Toru Watanabe, otu nwoke dị afọ 37 nke nọ n'ime ụgbọelu (nke na-ada ada) mgbe gee egwu pụrụ iche. Ibe ahụ - "Osisi Norwegian", nke ndị a ma ama n'asụsụ Bekee bụ́ Beatles— na-akpali ya ọtụtụ ncheta oge ntorobịa ya (site n'oge ya dị ka nwa akwụkwọ mahadum).
N'ụzọ ahụ, akụkọ na-aga n'obodo Tokyo n'oge 1960s. N'oge ahụ, ihe ndị na-enye nsogbu mere n'ụwa nile n'ihi agha oyi na mgba dị iche iche nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ka ọ dịgodị, Watanabe na-agwa nkọwa nke ọnụnọ ya na isi obodo Japanese nke nwere ezigbo obi iru ala na owu ọmụma.
Enyi na ọdachi
Ka akụkọ a na-aga n'ihu, protagonist na-echeta nkọwa banyere ha ahụmahụ mahadum, ụdị egwu ọ na-ege na omume dị iche iche nke ụfọdụ ndị ọrụ ibe ya. N'otu aka ahụ, Watanabe ngwa ngwa na-ezo aka na ndị hụrụ ya n'anya na ahụmịhe mmekọahụ ha. Ihe ọzọ o mere bụ igosi nwoke ahụ ọ hụrụ n'anya Kizuki, ezigbo enyi ya kemgbe ọ bụ nwata, na Naoko, enyi ya nwanyị.
N'ụzọ dị otú a, ndụ a na-ahụkarị kwa ụbọchị na-agabiga (ihe na-emetụ n'ahụ nke asụsụ dị mfe na nke dị nso nke akụkọ ahụ ...). ruo ọdachi amalite na ndụ ma na-egosipụta psyche nke ihe odide ahụ ruo mgbe ebighị ebi: Kizuki na-egbu onwe ya. Na ngbali ị meriri ọnwụ dị egwu, Toru kpebiri ịhapụ Naoko ruo otu afọ.
Naoko na Toru zutere ọzọ na mahadum mgbe protagonist oge nke iche. A) Ee, ọbụbụenyi ghọrọ ezigbo ọbụbụenyi nke mere ka mbikọ ọnụ nke a na-apụghị izere ezere malitere. Mana, ọ ka gosipụtara mgbaàmà nke ọgbaghara nke uche, ya mere, ọ dị ya mkpa ịnagide nsogbu nke oge gara aga. N'ụzọ dị otú a, a nabatara nwa agbọghọ ahụ na etiti maka enyemaka enyemaka na izu ike.
Ndobe Naoko mere ka owu mara Watanabe, n'ihi nke a, ọ malitere igosipụta ihe ịrịba ama nke ịdị adị na-adịghị agazi agazi. Mgbe e mesịrị, ọ chere na ọ hụrụ Midori n'anya, nwatakịrị nwanyị ọzọ jere ozi iji belata ihe mgbu ya ruo nwa oge. Mgbe ahụ, Toru ama akpa ke ata ọkpọsọn̄ oyobio, udọn̄ idan̄, ye unana nsọn̄ido mmetụta uche tọrọ atọ n'etiti ụmụ nwanyị abụọ.
Mmepe nke ihe omume na - aghaghi ime ka onye na - akwado ya chee echiche di omimi site na nro. N'oge a, ọ gaghị ekwe omume ịkọwapụta nke ọma nke ihe bụ eziokwu na nke bụ echiche efu. N'ikpeazụ, nkwụsi ike a chọrọ ga-ekwe omume naanị mgbe onye ọhụụ ahụ nwere ike itolite n'ime.
Tokyo blues, n'okwu Murakami
N'ajụjụ ọnụ El País (2007) si Spain, Murakami kọwara n'ihe metụtara "nnwale" Badyo Tokyo, nke ọzọ: "Enweghị m mmasị ide ederede ogologo oge na usoro ezi uche dị na ya, ma m kpebiri na, ọ bụrụ naanị otu ugboro, m ga-ede ezigbo akwụkwọ. Onye edemede Japanese ahụ gbakwụnyere na ya anaghị agụkarị akwụkwọ ya mgbe e bipụtara ya, ebe ọ bụ na ọ nweghị mmasị na okwu ndị gara aga.
Mgbe e mesịrị, na N'ajụjụ ọnụ nke Xavier Ayén (2014) duziri, Murakami kọwara mmekọrịta ya na ndị nwere nsogbu nsogbu uche. Banyere nke a, o kwuru, sị: “Anyị niile nwere ụdị nsogbu nsogbu uche anyị, nke anyị nwere ike oge ụfọdụ na-edobeghị onwe anyị, n’emeghị n’elu ala. Ma anyị niile bụ ndị bịara abịa, anyị niile bụụrụ obere ara ”...
Nkebi ahịrịokwu iri nke Tokyo blues
"Ọchịchịrị gbara gị gburugburu, naanị ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịnọ nwayọ rue mgbe ọchịchịrị ga - eme ka anya gị mara gị ahụ."
"Ihe na-eme anyị nkịtị bụ ịmara na anyị abụghị ndị nkịtị."
"Emela ebere maka onwe gị. Naanị ndị mediocre na-eme nke ahụ ”.
"Ọ bụrụ na m na-agụ otu ihe ahụ dị ka ndị ọzọ, m ga-emesị na-eche echiche dị ka ha."
"Ọnwụ anaghị emegide ndụ, ọnwụ so na ndụ anyị."
“Idụhe owo emi amade ndobo. Mana enweghị m mmasị na imeta ndị enyi n’ọnọdụ ọ bụla ”.
"Ọ bụ na ahụghị m ụdị ebe nchekwa limbo ebe ncheta niile dị oke mkpa na-agbakọ wee ghọọ apịtị?"
"Nke ahụ na-eme gị n'ihi na ọ na-enye echiche na ị chọghị ịma ihe ndị ọzọ."
"A nwoke na-agụ ugboro atọ Akwa Gatsby o nwere ike bụrụ enyi m ”.
"Onye nwere obi ọjọọ ga-eti mkpu ma ọ bụ gbaa izu, na-adabere n'ụzọ ikuku siri fee."
Banyere onye edemede, Haruki Murakami
Onye amụrụ ama ama ama ama na Japanese taa ka amụrụ na Kyoto na Jenụwarị 12, 1949. Ọ bụ nwa nke onye mọnk Buddha na naanị nwa. Ndị mụrụ ya, Miyuki na Chiaki Murakami, bụ ndị nkuzi agụ akwụkwọ. N'ihi nke a, obere Haruki tolitere gburugburu obodo, nwere ọtụtụ akwụkwọ sitere n'akụkụ dị iche iche nke ụwa (yana yana Japanese).
Haruki Murakami see okwu.
N’otu aka ahụ, egwu Anglo-Saxon bụ okwu a na-ahụkarị n’ezinụlọ Murakami. Ruo n'ókè nke na egwu na edemede nke mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ bụ ihe e ji mara Murakamian ederede. Mgbe e mesịrị, nwa okorobịa Haruki họọrọ ịmụ ụlọ ihe nkiri na Greek na Mahadum Waseda, otu n'ime ndị a kacha akwanyere ùgwù na Japan. N'ebe ahụ ka ọ hụrụ onye taa bụ nwunye ya, Yoko.
Okwu mmalite nke onye na-ede akwụkwọ n'ọdịnihu
N'oge ọ bụ nwa akwụkwọ mahadum, Murakami rụrụ ọrụ n’ụlọ ahịa egwu (maka ihe ndekọ vinyl) na ebe obibi jazz na-agakarị "Redị egwu ọ hụrụ n'anya." Site na uto ahụ ọ malitere na na 1974 (ruo 1981) o kpebiri ịgbazite ebe iji wee nwee ụlọ jazz yana ya na nwunye ya; ha mere ya “Peter Cat.” Di na nwunye ahụ kpebiri ịghara ịmụ ụmụ n'ihi enweghị ntụkwasị obi ha nwere n'ọgbọ na-abịa.
Nbili nke ode akwukwo kachasi nma
Na 1978, Haruki Murakami tụụrụ ime echiche nke bụrụ onye edemede n'oge egwuregwu baseball. Afọ na-esote tụbara Nụrụ abụ ifufe (1979), akwụkwọ mbụ ya. Kemgbe afọ ise ahụ, onye edemede Japanese nọgidere na-eke akụkọ na ndị nwere ihe ijuanya n'ọnọdụ ụfọdụ na-agbagha.
Murakami biri na United States n'etiti 1986 na 1995. Ka ọ dịgodị, mwepụta nke Osisi Norwegian - Aha ọzọ nke Badyo Tokyo- akara akara ngosi na ọrụ edemede ya. Agbanyeghi na otutu nde ndi na-eso uzo ya toro akuko ya, o kewaputara na ndi nkatọ siri ike.
Stylistic na echiche atụmatụ nke akwụkwọ Haruki Murakami
Surrealism, anwansi n'ezie, oneirism ... ma ọ bụ ngwakọta nke ha niile?
Ọrụ nke onye edemede ahụ site na ala nke ọwụwa anyanwụ na-ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị. Ma ha bu ndi nchoputa akwukwo, ndi nyocha akwukwo ma obu ndi nagu, echiche nke eluigwe na ala murakamian na-akpali mmasị siri ike ma ọ bụ ibu iro pụrụ iche. Nke ahụ bụ, ọ dị ka enweghị isi mgbe ị na-enyocha ọrụ Murakami. Gini bu ihe kpatara udi (pre) ikpe?
N'otu akụkụ, Murakami na-eche echiche ide ihe na ebumnuche nke ahụ Okwu nzuzu, n'ihi nkwenye ya na-enweghị mgbagha na nrọ ụwa. N'ihi ya, ntọala ndị na-adịghị adịkebe nke ndị Japan kere bụ ndị dị nso na akụkọ efu. Na mgbakwunye, aesthetics, ụfọdụ odide na akwụkwọ ọgụgụ debe otutu myirịta na ọdịdị nke kpokọtara n'ezie.
Echiche efu, ebe dị ka nrọ, na mbara igwe ndị ọzọ bụcha ihe ndị dị n'ime akụkọ Murakami.. Agbanyeghị, ọ dịghị mfe ịkọwapụta ya n'ime otu ihe ugbu a, ebe ọ bụ na n'akụkọ ha, a na-ekpughere ma ọ bụ na-agbagọ oge na akụkọ ha. Ngbanwe a nke eziokwu nwere ike ime na ndaputa echiche efu ma obu n'ime uche nke ndi odide.
Gini mere akụkọ banyere Murakamian ji kpatara oke ibu iro?
Murakami, dị ka ndị ọzọ na-ere ahịa kacha mma - Dan Brown ma ọ bụ Paulo Coelho, dịka ọmụmaatụ-, a boro ya ebubo na ọ "na-emeghachi ihe odide ya na ihe ndekọ ya." Tụkwasị na nke a, ndị na-ekwujọ akwụkwọ ndị Eshia na-egosi na enweghị oke ókè n'etiti echiche ahụ na ezigbo na-emecha bụrụ ihe mgbagwoju anya (na-enweghị isi?)
Kaosinadị, a na-ahụ ọtụtụ adịghị mma Murakami dị ka ezigbo omume site na ụyọkọ ndị fan na olu ndị dị mma n'ụzọ mbụ ọ si akọ akụkọ. A na-ahụta njirimara niile akpọrọ gbasara akụrụngwa akụrụngwa dị ka ihe efu, nke yiri nrọ na echiche efu Badyo Tokyo.
Akwụkwọ Murakami 5 kacha ere ahịa
Badyo Tokyo (1987)
Akwụkwọ nke nnụnụ ikuku na-efe n’elu ụwa (1997)
Sputnik, my love (1999)
Kafka n’ikpere mmiri (2002)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Badyo Tokyo
Jane Austen: akwụkwọ
Juan Tranche. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Spiculus